Iingcebiso zokuThengiswa kweeNkcazo I-ECN Trading Trading Forex Benefits neFXCC
Ikhaya / malunga / Kutheni iFXCC
Kutheni iFXCC? Nasi isizathu ..
Kukho uninzi lwabathengi kumashishini ethu abafuna ishishini lakho. Ngoko yintoni eyahlula i-FXCC kwabanye, kutheni sizijonga ngathi yinto engcono kakhulu? Kutheni ufanele uthengise ngathi, kunokuba omnye umthengisi? Yintoni eyenza sikhetheke?
Akufanele ube ngumthamo ophezulu wokuba umntu ngamnye abe namaqela eFXCC, sinemifanekiso kwiFXCC; "Iimithi ezinkulu ze-oki zikhula ukusuka kwiincinci ezincinane". Sisebenzisa ngenxa yokuba siye sabona abaninzi abathengi, abaye bathengisa nathi ukususela ekuqaleni kwethu, bakhula kunye nathi ukuba babe ngabarhwebi abaqhelekileyo.
Ngoko siya kuvuya kukuncedisa ngeenqweno zakho, nayiphi na inxalenye yomjikelo wokukhula okwangoku. Elitsha ukuthengisa? Siyakwamkela, masiqale. Ubungcali obufanelekileyo? Siyicinga ukuba sinento kuwe, ingqinamba yokwenene ukubonisa kuwe.
Siphinde sime emva kwesiqubulo sethu sokuba "umthengisi ecaleni lakho". Kodwa njani "siphezu kwakho"? Okokuqala, sifuna ukuba uphumelele, sifuna ukuba uphumelele kwaye uphuculise kwaye uphucule izakhono zakho njengomthengisi. Kunengqiqo xa ucinga ngako. Abaphumeleleyo, abanolwazi, abachwephesha abanezobugcisa banomdla. Ukuba uphumelela koko uya kuqhuba ukurhweba kunye nathi kwaye ujabulele zonke iinkonzo esiza kuzinikela.
Ekuqaleni saqala ukurhweba njengomthengisi olula, ocacileyo we-forex kwaye njengoko siye safikelela amaninzi amanqanaba ethu okukhula, siye sakhula ngokubhetele. Njengoko iteknoloji kwishishini lethu liqhubele phambili kwixesha elikhawulezayo, siye savuma kwaye sisentliziyweni yazo zonke izinto zophuhliso lwezobuchwepheshe, ukuqinisekisa ukuba siye sahlala ngokufanelekileyo kumashishini ethu. Ngoku siye saqulunqa idumela elihle, sisesekelwe kwinjongo yethu yokuqala yokucwangcisa inkqubo yokurhweba, ngelixa ukubeka unonophelo lwabathengi ngaphambili kwishishini lethu. Siphatha ngamnye nomntu ngamnye kubaxhasi bethu ngenhlonipho enkulu kunye nokuqwalasela.
Sinokukunceda ukuba uphumelele ngokubonelela ngokurhweba ngokupheleleyo kunye nokuphathwa ngokusingqongileyo ukuze uhlawule; imiyalelo yakho iya ngqo ekuthengiseni kwaye ihambelaniswe, akukho phazamiso lwedesksi lokusebenza. Ukusebenzisa umzekelo wethu we-ECN / STP uqinisekisa ukuba ufikelela kwimarike ngokukhawuleza njengoko ubugcisa bekhompyutha buya ku vumela. Uya kufumana iingcaphuno ezigqibeleleyo kwaye uzalise imarike inokuyihambisa, ngendlela efanelekileyo kwaye ebonakalayo.
Sikunceda ekuphuhliseni njengabahwebi ngokubonelela ngeencwadi zokuqala zophando. Akunjalo amanqaku ahlanganisiweyo kunye namanani amaninzi adidekileyo, ahlala ekhutshwa njengengcinga engaphambili, oya kuboniswa ngabanye abathengi. Kodwa ingqwalasela ingqwalasela, ingcaciso kunye neenkcukacha ezichanekileyo, ukukunceda ukunceda izigqibo zakho.
Sisebenza kuphela inkonzo. ECN Forex Abaxhasi bazuza kwiintlawulo ezincinci ngokuthengiselana. Okuphakamileyo kwimilinganiselo yokurhweba abathengi bee-brokers bavelisa, ukuphakama kwenzuzo yomthengisi. Ukufumana umyalelo wakho wokuthengisa kunye nomyalelo ozaliswe ngokukhawuleza kunokwenzeka, yinjongo yethu ngqo kunye nomsebenzi.
Ngoko ke unayo; malunga nathi isingeniso esicacileyo, esicacileyo kunye esicacileyo njengoko inkonzo nganye sizinikezela abathengi bethu. Kungenzeka ukuba uzame ezinye zezinye, kutheni ungasivumeli ithuba lokubonisa isizathu sokuba sicinga ukuba siyena nto?